Istaraatijiyad Ganacsi | vfxAlert official blog
Si aan u bilawno, aan cadeynno: waxaad ku kasban kartaa dakhli isdaba joog ah adoo ka ganacsanaya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Xaqiiqdii waa suurtagal in la soo saaro faa'iido wax ku ool ah. Ganacsatada xariifnimada ah waxay tan sameeyaan maalin kasta iyaga oo ka ganacsanaya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ka bilaabma saliid iyo dahab illaa saamiyada iyo lamaanaha lacagta.
Hadda, su’aashu waxay tahay: ma fududahay in lacag la helo sida mareego iyo dalaaliin badani sheegtaan?
Fiirin deg deg ah oo ku saabsan fara ku tiriska ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ku siinaya aragti ah in waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku sameyso ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaariyadeed leh ay tahay in xisaab laga abuuro barxadaha dallaalka. Qaar ka mid ah dallaaliinta ayaa si sharaf leh ugu dhawaaqaya in soo noqoshada 70% lagu soo saari karo daqiiqado. Sidoo kale, tan waxaa suuragal ah in mar labaad iyo mar kale la sameeyo inta lagu jiro maalinta. Way adag tahay in la iska indhatiro, gaar ahaan marka noocyada kale ee maal-gashiga ay bixiyaan soo-celin aad u hooseysa. Laakiin haddii aad lacag ku heli karto ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waa lagama maarmaan in la helo istaraatiijiyad dhab ah.
Istaraatiijiyaddu waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan haddii aad rabto inaad ku guuleysato ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waa jihada ku dhex jirta qaabka go'aannada oo dhan la qaadanayo. Istaraatiijiyaddu waa inay tixgelisaa sharciyada maareynta lacagta iyo fahamka shaqada suuqa. Nasiib darrose, ma jirto istiraatiijiyad guuleysata . Hadday jiraan, kulligeen waan isticmaali lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku horumarin kartaa istiraatiijiyaddaada ku saleysan aqoontaada, khibraddaada, iyo barashada joogtada ah.
Waa maxay muhiimadda ay leedahay istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah?
Haddii aad go'aansato inaad ku bilowdo ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh caqligaaga iyo mala-awaalkaaga, runta ayaa ah, wax lacag ah ma sameyn doontid. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah laguma ganacsan karo shucuurta aaminsan in aad nasiib yeelan doonto. Si macquul ah ayaad wax badan u waayi doontaa. Taasi waa sababta aysan muhiim u ahayn in la yeesho istaraatiijiyad looga ganacsado ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah . Falanqaynta iyo hagaajinta istiraatiijiyaddu waxay ku siineysaa qaab habeysan oo aad u weyneyso dhinacyada wanaagsan ee ganacsigaaga iyo istiraatiijiyadyada maareynta lacagta adoo hagaajinaya ama ka saaraya waxyaabaha aan fiicnayn ee xeeladahaaga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad faa'iido badan u yeelato mustaqbalka fog oo aad la qabsato xaaladaha suuqa isbeddelaya.
Taas la'aanteed, dheelitirka koontadaada ayaa laga yaabaa inuu gaaro eber, xitaa haddii aad leedahay istiraatiijiyad ganacsi oo heer sare ah . Luminta guntin iyo is-weydaarsiga aan faa'iido doonka ahayn waa qayb nolosha ka mid ah, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in la helo istiraatiijiyad lagu tixgelinayo lama huraanka ah. Waxay ka dhigan tahay maamulida lacagtaada si loo kordhiyo faa'iidooyinkaaga, loo xaddido khasaarahaaga, iyo, tan ugu muhiimsan, inaad ku noqoto boos faa'iido leh ka dib aag xun.
Sababta labaad ee haysashada istiraatiijiyad ganacsi ayaa ah inay kuu oggolaaneeyso inaad ka faa'iideysato ku celcelinta. Haddii aan la helin istiraatiijiyad noocan oo kale ah, malaha ma ogaan doontid waxa shaqeeyay iyo sababta. Xitaa haddii ay dhacday, way adkaan doontaa in lagu celiyo.
Istaraatiijiyad ganacsi ayaa xaqiijineysa in macaamilladaada ay ku saleysan yihiin feker cad oo macquul ah iyadoo la hubinayo inay jirto qaab lagu soo celin karo, la falanqeyn karo, la hagaajin karo, laguna hagaajin karo.
Samee istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar la’aan karysa maleegaysa ikhtiyaar loo heysto loogu deeqayo
Sida kor lagu sharaxay qodobkaan, istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa lagama maarmaan ah haddii aad rabto inaad ku shaqeyso faa'iido. Tani waxay siineysaa qaab dhismeedka ganacsigaaga, waxay ka saareysaa habka go'aan qaadashada ee ku saleysan dareenka, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad falanqeyso oo aad horumariso.
Sideed ku ogaaneysaa inay istiraatiijiyad shaqeyn doonto adiga oo aan qatar gelin lacagtaada? Ka dib oo dhan, sidee ku ogaan kartaa in istiraatiijiyaddu aysan shaqeynayn iyada oo aan la isku deyin? Haddii aad isku daydo istiraatiijiyad aan ku shaqeynayn lacagtaada, waad lumineysaa. Tani waxay sababi kartaa in lacagaha la heli karo la dhaafo ka hor dhamaadka wajiga imtixaanka, taas oo kaaga tagi doonta wax aad ku guuleysato oo aad ku macaashto, waa inaad leedahay istaraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh.
Waxaa jira hal xal: ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ah. Dhammaan dallaaliinta tayada leh ee la isku halleyn karo iyo kuwa faa'iidooyinka leh iyo istaraatiijiyadaha ganacsiga waxay bixiyaan xisaabaadka demo. Waxay kuu oggolaanayaan inaad tijaabiso barxadda, laakiin ugu muhiimsan, inaad tijaabiso xeeladahaaga ganacsi adoo adeegsanaya xaaladaha suuqa dhabta ah. Tijaabada waxaa lagu sameeyaa adiga oo adeegsanaya lacag dalwad ah, markaa ma jirto lacag dhab ah oo ku lug leh. Dabcan, xitaa ma sameyn kartid lacag, laakiin taasi maahan su'aasha. Faa'iidada koontada demo waa in la xoojiyo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh.
Xeeladaha Shaxda Ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Guud ahaan, ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waa maalgashi muddo gaaban ah oo u baahan cilmi baaris iyo falanqeyn farsamo. Sababtaas awgeed, falanqaynta iyo fasiraadda jaantusyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa aad muhiim ugu ah guusha ganacsade kasta, maadaama ay caqabad ku noqonayso in faa'iido la helo iyadoo aan la ogeyn faahfaahinta jaantusyada akhriska iyo falanqaynta farsamada. Calaamadaha vfxAlert waxay ku siin karaan caawimaad dheeraad ah falanqaynta. Calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxay u adeegaan inay xaqiijiyaan istiraatiijiyaddaada waxayna kaa caawinayaan inaad go'aan sax ah ka gaarto heshiiska.
Istaraatiijiyaddu waxay fududeyneysaa is-weydaarsigaaga, waxay baabi'ineysaa hubin la'aanta la xiriirta doorashada ganacsiga, waxayna yareyneysaa halista guud.
Haysashada istiraatiijiyad ganacsi oo loogu talagalay ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu u baahan yahay faham aasaasi ah oo ku saabsan sida suuqa u shaqeeyo marka la eego qandaraasyada ganacsi ee la heli karo, waqtiyada dhaca ee kala duwan, iyo fahamka habdhaqanka hantida shaqsiyeed.
Shaki kuma jiro, ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa bixiya fursado dhammaan xaaladaha suuqa. Wayna sameeyaan. Laga soo bilaabo xagga sare ama hoose ee isbeddelka suuqyada illaa suuqyada fargeeto ama fargeeto, ama xitaa suuqyada ugu kacsan ama aan la saadaalin karin, waxaa jira baahi loo qabo inaad yeelato istiraatiijiyad ka hor intaadan ka ganacsan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la fahmo istiraatiijiyadda loo adeegsanayo xaalad kasta, iyo dhacdo kasta, waa inaad leedahay xeelad si fiican looga fikiray xaalad kasta oo suuq ah.